Noti Katsi iyi webhusaiti yanga ichikuzivisa kubvira 2012 nezvose zvaunoda kuti uzive katsi yako: hosha, zvinhu zvainoda, kusarudza chikafu chayo, ndeapi marwere aanogona kuva nawo, uye zvakawanda, zvakanyanya kuti unogona kunakidzwa nekambani yako kwemakore mazhinji. Kunyanya kubatanidza.
Dare rekunyora reNoti Gatos rinoumbwa nevapepeti vanotevera. Kana iwe uchifarira kushanda nesu, iwe unofanirwa kudaro zadza fomu rinotevera uye tichasangana newe.
2 Vaimbove vapepeti
Ini ndinofunga katsi dzinoyevedza mhuka kubva kwatinogona kudzidza zvakawanda kubva kwadziri, uye zvakare kubva kwatiri. Izvo zvinonzi izvi zvidiki felines zvakazvimiririra kwazvo, asi chokwadi ndechekuti ivo ishamwari huru uye shamwari.
Sezvo ini ndichigona kurangarira ndinogona kuzviona semudiwa wekati. Ndinovaziva kwazvo nekuti kubvira ndichiri mudiki ndakave nekatsi kumba uye ndakabatsira katsi dzaive nematambudziko… handigone kubata hupenyu ndisina rudo uye rudo rusina zvimiro! Ndakagara ndichigara ndichidzidziswa kuti ndikwanise kudzidza zvakawanda pamusoro pavo uye kuti katsi dziri mumaoko angu, dzinogara dzichitarisirwa zvakanyanya uye nerudo rwangu rwechokwadi kwavari. Neichi chikonzero, ini ndinotarisira kuzokwanisa kuendesa ruzivo rwangu rwese nemazwi uye kuti anokosha kwauri.
Ini ndiri muColombia uyo anoda kitsi, dzayo ini ndinonyanya kufarira nezvehunhu hwavo uye hukama hwavanadzo nevanhu. Idzo imhuka dzakangwara kwazvo, uye kwete sevanhu vakasurukirwa sezvavanoda kuti titende.
Ini ndinogona kutaura kuti katsi inogona kuve shamwari yepamwoyo yemunhu. Nguva dzose vakatenderedzwa navo, vanondishamisa uye vanondishamisa nekwaniso yavo yakakura yekugadzirisa uye, pamusoro pezvose, rudo rusina mvumo rwavanokuratidza. Kunyangwe uri wakazvimiririra uye uine mukurumbira sekuzvimiririra, unogona kugara uchidzidza zvakawanda kubva kwavari, kana iwe uine moyo murefu wekuzvidzidza.
Ini ndinonzwa kuda kuziva kukuru pamusoro penyika yekatsi izvo zvinonditungamira kuti ndiongorore uye ndoda kugovana ruzivo rwangu. Kuziva hunhu hwavo, mutauro wavo, uye mararamiro avo akakosha kuti vagare zvakanaka.